बागलुङमा गणक तथा सुपरीवेक्षकका लागि तीन गुणा बढी आवेदन, माग संख्या कति ? - Jillakhabar.com
बागलुङमा गणक तथा सुपरीवेक्षकका लागि तीन गुणा बढी आवेदन, माग संख्या कति ?
बागलुङ, २२ चैत २०७७ ।
‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय जनगणना– २०७८ का लागि बागलुङमा आवश्यक तयारी तीव्ररुपमा भइरहेको छ । केही हप्ता अगाडि बागलुङमा जिल्ला जनगणना कार्यालय स्थापना भएपछि तयारीलाई तीव्रता दिइएको हो । जनगणनाका लागि आवश्यक गर्ने गणक र सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिने तयारी भइरहेको तथ्याङ्क कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि हुन थालेको पहिलो जनगणनाले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई नीति तथा बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । जनगणना गर्न बागलुङमा ४०६ गणक र १०० सुपरीवेक्षक करारमा नियुक्त गर्ने भएको छ । करारमा नियुक्त जनशक्तिले नपुगेमा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीलाई लिन सकिनेछ ।
करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरिएको दरखास्तमा तीन गुणा बढी अर्थात् एक हजार ८३६ ले आवेदन दिएको तथ्याङ्क कार्यालय बागलुङका प्रमुख जनगणना अधिकारी मुकुन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । स्नातक तह वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिले सुपरिवेक्षक र गणक दुवै पदका लागि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर भर्ना भने कुनै एक पदका लागि मात्र लिइने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गणकका लागि भने दश जोड दुई वा सो सरह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ ।
अहिलेको जनगणनालाई व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक बनाउनका लागि ८० प्रश्न तयार गरिएको छ । जनगणनापछि सबै जानकारी प्राप्त गर्नका लागि ८० प्रश्न सोधिनेछ । जनगणनामा शुरुमा सुपरीवेक्षक घरमै पुगेर २५ प्रश्न सोध्नेछ भने त्यसपछि गणक गएर ५५ प्रश्न सोध्नुपर्नेछ । जनगणना अधिकारी शर्माका अनुसार सुपरीवेक्षकले घरमुली, जग्गा, कृषि र बैंक खाताको विवरणलगायतका प्रश्नको उत्तर ल्याउनेछ भने गणकले व्यक्तिगत खण्ड, पारिवारिक खण्ड र आर्थिक कारोबार खण्डका आधारमा प्रश्न गर्नेछ । यसका लागि सुपरीवेक्षकलाई १० मिनेट र गणकलाई ३० मिनेट समय लाग्नेछ ।
जनगणनाको प्राथमिक तथ्याङ्क गणना सकेको छ महिनामै आउनेछ । अहिले सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा डिजिटल माध्यमबाटै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछ भने नगरपालिका र गाउँपालिकामा कागजी फारम भर्नुपर्नेछ । अहिलेको जनगणनामा जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइका साथै मातृ मृत्युदरको विषयमा समेत जानकारी लिइनेछ ।
गणकद्वारा प्रत्येक घरधुरीमा पुगेर मुख्य प्रश्नावलीमार्फत पारिवारिक विवरण तथा व्यक्तिको जन्म, मृत्यु बसाइँसराइलगायत विवरण सङ्कलन गरिनेछ । दोस्रो चरणअन्तर्गत नै सबै स्थानीय तहका प्रत्येक वडा कार्यालयबाट वडास्तरीय सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत वडाको आधारभूत स्रोत साधन, पहुँच, क्षमता पूर्वाधार र विपद्सम्बन्धी विवरण सङ्कलन गरिनेछ ।
घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फाराम २०७८ वैशाख २६ देखि जेठ १४ र मुख्य प्रश्नावली २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म विवरण भर्ने व्यवस्था छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार बागलुङ जिल्लाको जनसङ्ख्या दुई लाख ६८ हजार ६१३ छ । नमूना जनगणनालाई प्रश्नको विषय, समय तथा गणकको सङ्ख्याका आधार मानिएको छ । जनगणनाको मुख्य आधार जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइ छ ।
Previous articleतपाईको आजको राशिफल कस्तो होला ? १२ वटै राशिको भाग्यफल हेर्नुहोस्
Next articleBreaking News: काेराेनाकाे जाेखिम बढ्दै, भारतबाट फर्कने ५६ को एन्टिजेन नतिजा पोजेटिभ